पाचन प्रक्रिया गडबडी भए के गर्ने - खबर मलाई
पाचन प्रक्रिया गडबडी भए के गर्ने
१५ श्रावण २०७६, बुधबार १५ श्रावण २०७६, बुधबार खबर मलाईLeaveaComment on पाचन प्रक्रिया गडबडी भए के गर्ने
मानिसको शरीरमा सबैभन्दा बढी छिटो रोगले प्रवेश गर्ने स्थान भनेको पेट र फोक्सो हो । पेट र फोक्सोमा रोगका किटाणु सजिलै र प्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश गर्दछन् । हावा जेजस्तो छ, त्यस्तै सिधै फोक्सोमा जान्छ । खाना पनि जे खायो सिधै पेटमा जान्छ । त्यसैले, यी कुरामा बढी ख्याल पु¥याउनुपर्छ । जीवनमा स्वस्थ रहनु भनेको शरीर स्वस्थ रहनु हो । शरीर स्वस्थ राख्नका लागि सबैभन्दा पहिले पेटको विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । त्यो भनेको पाचन प्रक्रियामा गडबडी नआओस् भन्ने नै हो । पाचन प्रक्रियामा गडबडी आएमा जीवन आफैमा अस्वस्थ हुन्छ र स्वस्थ जीवन जिउने परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन ।
पाचन प्रक्रिया असन्तुलित भयो भने सारा शरीर बिरामी हुन्छ । पेटबाटै चारैतिर रोग र समस्या फैलन थाल्छ । सरल खालका रोग पनि पेटबाटै फैलन्छन् भने जटिल र गम्भीर प्रकारका रोग पनि पेटबाटै फैलन्छन् ।
जब रोग पेटमा पुग्छ, यसले सबैभन्दा पहिले पाचन प्रक्रियालाई अव्यवस्थित बनाउँछ । अनि सिंगो शरीरमा गडबडी पैदा हुन थाल्छ । पहिलो कुरा त खानामा निकै होस पु¥याउनुपर्छ । यदि त्यसो गर्दागर्दै पनि केही भइहालेमा निम्न उपाय अपनाउनु पर्छ ः
१. मेवाको निकै बढी सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मेवामा एक खालको इन्जाइम हुन्छ, यसले प्रोटिनलाई टुक्य्राएर पचाउन निकै मद्दत गर्दछ । यसले विभिन्न प्रकारका भिटामिन र खनिजलाई पनि मिलाएर पाचन प्रक्रिया सहज बनाइदिन्छ ।
२. पाचन प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउने अर्को खाद्य पदार्थ भनेको दही हो । दहीमा पाचन प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष सहयोग प¥याउने एकखाले रासायनिक पदार्थ हुन्छ । तर, यो रासायनिक पदार्थ दुध भने पाइँदैन । मानिसहरूले दुध भन्दा दही मन पराउनु पनि यही कारणले गर्दा हो । यो रासायनिक पदार्थका कारण पेट दुखाइ, अपच, कब्जियत, ग्यास्ट्रिकलगायतका समस्याहरू कम हुन्छन् ।
३. यसपछिको अर्को सहयणेगी खाद्य पदार्थ भनेको केरा हो । रेसायुक्त हुनाले केरा केरा पाचन प्रक्रियाका लागि अति नै आवश्यक कुरा हो । यसले मानिसको पाचन प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका खेल्ने स्वस्थकर ब्याक्टेरिया वृद्धि गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
४. पाचन प्रक्रियामा सहयोग प¥याउने अर्को खाद्य मसला हो, अदुवा । यसको प्रयोगले पाचन प्रक्रियामा निकै सुधार ल्याउँछ । अदुवाले शरीरलाई चाहिने इन्जाइम उत्पादनमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।
५. त्यसै गरी स्याउ शरीरमा पाचन प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने निकै महŒवपूर्ण फल हो । स्याउमा फाइबर वा रेसा निकै बढी हुन्छ । यसले पाचनसम्बन्धी समस्या भएका ठाउँमा पुगेर मलमको
काम गर्दछ ।
६. त्यस्तै गरी रेसा र इन्जाइम प्रशस्त पाइने अर्को फल हो, भुइँकटहर । यसले खाना पचाउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । एक्कासि अस्वस्थ भए र त्यो पनि पाचन प्रक्रियामा देखिएमा माथिका तरिकाहरू प्रयोग गरी शरीरलाई आराम दिलाउनुपर्छ । Source- rajdhanidaily.com .
साउन १५ खीर खाएर मनाईँदै, यी हुन् खीरका फाइदा
१४ असार २०७६, शनिबार १४ असार २०७६, शनिबार खबर मलाई
६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ६ भाद्र २०७६, शुक्रबार खबर मलाई